Filim qurux badan bay maanta Jileen taliskq Ciidanka boliiska Soomaliya | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Filim qurux badan bay maanta Jileen taliskq Ciidanka boliiska Soomaliya
FILIN FLOP AH LACAGTA LA QABTAY
Filim Qurux badan bey inoo jileen kooxda Farmaajo. Waxaa igu soo dhacay brobogando ay kol dhoweyd fidiyeen oo aheyd doon 200 milyan dollar sida ayaa ciidamada xooga dalku ku qabteen xeebta Ceelmacaan ee duleedka bari ee Muqdisho ee Hirshabele. Taas oo ay cadeynteda soo bandhigi waayeen. Balse lagu daboolayey arinkii dhuusamareeb ee uu Farmaajo ka soo cararay weji gabaxeeda.
Haatana waxaa Garoonka la geeyay lacag copy 2019 ah oo la yiri meel ay ka timid iyo meel ay u socotay lama yaqaan. Shaqsi Ay dhalashadiisu tahay Aljerian ayaa loo qabtay. Aan is weydiino dayuurad wax saaran oo aan last destination iyo departure aan laheyn miyaa jiri kara.
Hadaba ujeedadu waa in lagu demiyo oo lagu daboolo xasarada siyaasadeed ee haatan taagan. Qaraxyo ayaa lagu demin jiraye hadiiba aad lacag inooga dhigteen waad roon tihiin. CBB Emirates ayaa laga keenay bey yiraahdeen. Yaa u sheegay booliskuba ma shaacine Taas oo cadeyn u ah shakiga laga qabo xaqiiqada arintaa
Filim waqtigiisa la soo dhaafey jileen oo flop ah
Previous articleTaliska Boliiska Eraboorka oo Qabtay shaqsi Boorso kuwatay lacag dhan 200 000 kun oo Doolar
Next articleSafaarada UK Soomaaliya oo beenisay in ay taageertay Mudo kordhinta Villa Somaliya aqriso Warka Safaarada
Garsoore Kenyan oo la hadlay warbaahinta dalkaas ayaa sheegay inay dacwadda badda ee kala dhaxeysa Somalia u gudbin doonaan Golaha amaanka QM. Waxaa uu tilmaamay...
Maydadkii 215 caruur ka soo jeeda dadka loogu yimid ...
Madaxweynaha dalka Masar Abdulfataax Al Sisi oo booqasho ku tegay Jabuuti...